Jabuuti: Shirka wadahadallada Soomaaliya iyo Somaliland muxuu kaga duwan yahay kuwii hore? - Tilmaan Media
Jabuuti waxaa ka socday shirka wadahadallada dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Jamhuuriyadda iskeed madaxbanaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland iyadoo ay ku kulmeen wufuudda labada dhinac si guud iyo si gooni gooni ah, maxay tahay waxyaabaha shirkan uu uga duwan yahay kuwii hore?
Shirkan waxaa ka qeybgalaya wufuud culus oo ka kala socota labada dhinac, waxaana u kala dab qaadayaa madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ,iyadoo Ra’iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed lagu casuumay.
“Guddi culus ayaa meesha yimid madaxdii ugu sarreysay Soomaaliya iyo madaxweynihii Somaliland..wasiiro ka joogaa dad badan baa joogaa, waxay arrintani kaga duwan tahay kuwii hore Mareykankii baa joogaa oo laftiisa dabada ka riixaya, Ra’iisul wasaarihii Itoobiya oo awal aanan lagu tirin jirin in madaxda Itoobiya ay taageerto isku imaansho iyo wax noocaas ah, waxaan u jeedaa Midowgii Afrika, Midowgii Yurub, Jamciyadda Quruumaha ka dhexeysa..Runtii rajo weyn ayay arrintaas keeneysaa marka la eego jawigu ay wax ku bilaabmayaan oo waxay u egtahay in meel loo socdo”
“Dabcan maskaxdaa ah in icitiraaf ay u socota Somaliland oo aanay wax kale u socon.. Soomaaliyana madaxweynaha dastuurka lagu doortay wuxuu oronayaa waa in aad marnaba ogolaanin wax kala go’ ah Soomaaliya la yiraahdo”
“In dhaqaale ahaan ay isku furmaan oo ninka Abiy Axmed ah kuwa qaatay Nobel Peace Prize, arrintaa dabada waa ka riixayaa Mareykankii ayaa u yar jeedaa, oo Soomaaliya maalgelin badan baa la sameyn karaa hadda, dekeda la dhisayaa, patrool baa la helay.. umuurahaa adduunkii uu usoo yar jeeda iyo geeska afrika siyaasaddiisu oo isbaddashay baa keeneysaa xamaasaddan faraha badan iyo rajadan faraha badan, rajaana jirta”
Dabayaaqadii 2014-kii ayey aheyd markii isla madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle uu casuumaad ugu fidiyay magaalada Jabuuti madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynihii hore ee Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo.
Gunaanadkii shirkaasi waxa ay madaxda labada dhinac ku heshiiseen lix qodob oo ay aheyd in dhinacyadu ay fuliyaan, si xal looga gaaro xiriirka u dhaxayn kara labada dhinac.